फाल्गुन १५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय निर्णय अनुसार उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गर्न सिफारिस नगर्ने सन्देशसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद उत्कर्षतर्फ अग्रसर भएको देखिएको छ ।
बुधबार विहान बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णयको केही घन्टा वित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउनु भयाे ।
गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सचिवालयको निर्णय कार्यन्वयन नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै मनोनयन गर्न सिफारिस गरे भने सचिवालयको बहुमतले उनीविरुद्ध अर्को कदम चाल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । ओलीले ‘अपि्रय कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्छ’ भन्नु र पार्टीका बहुमत नेता उनको विपक्षमा उभिनुले असमान्य अवस्था आउनसक्छ ।
नेकपामा त्यो अवस्था आइसकेको भन्न सकिन्न । किनकी त्यसबेलाका देउवा र अहिलेका ओलीको अवस्था फरक छ । देउवा पार्टी सभापति थिएनन् भने ओली नेकपाको पहिलो बरियतामा रहेका अध्यक्ष हुन् । साथै निकै विवादका बीच पनि ओली र प्रचण्डले ‘सरप्राइज’ निर्णय गर्ने गरेका छन् ।
नेकपाकै केही नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बामदेव गौतमको निर्णय कार्यन्वयन गरेर पनि युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिन सकिने विकल्प समेत सुझाएका छन् । अहिले गौतमलाई रोक्दा पार्टीमा समस्या आउने भएकाले अर्को विकल्प सुझाइएको स्रोतको दाबी छ । त्यो भनेको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट उनलाई मन्त्रिपरिषदमा पुनःनियुक्त गर्ने र ६ महिनाभित्र कुनै एक सांसदलाई राजीनामा गराएर राष्ट्रियसभामा ल्याउन हो ।
तर बामदेवलाई राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सिटमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय भएपछि ओली रुष्ट बनेका छन् । उनको असहमति बामदेवलाई सांसद बनाउन खोजिएकोमा भन्दा पनि डा. खतिवडालाई रोक्न खोजिएकोमा भएको उनी निकटवर्तीले बताए ।
नेता नेपालले पार्टीभित्र संस्थागत निर्णयका आधारमा चल्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनले यसबीचमा ओलीबाट धेरै अपमान र दबाव सहनुपरेको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले त्यो विकल्प निकै पर रहेको नेता नेपाल निकट स्रोतको दाबी छ । यो समाचार अनलाइन खबरमा छापिएको छ ।